ဟန်းဂုရွာ: (မေဒေး အလုပ်သမားနေ့အတွက် အထူးဆောင်းပါး-၁) 출국만기보험(ပြည်တော်ပြန်အာမခံကြေး)နှင့် 퇴직금(လုပ်သက်ခံစားခွင့်)က တူပါသလား။
(မေဒေး အလုပ်သမားနေ့အတွက် အထူးဆောင်းပါး-၁) 출국만기보험(ပြည်တော်ပြန်အာမခံကြေး)နှင့် 퇴직금(လုပ်သက်ခံစားခွင့်)က တူပါသလား။
ကိုရီးယားလို 퇴직금(ထွဲဂျိဂွန်)၊ မြန်မာလို လုပ်သက်ခံစားခွင့်ဆိုတာ လုပ်သက်တနှစ်နှင့်အထက်ရှိသူတိုင်း အလုပ်ထွက်တဲ့အခါ ၁၄ရက်အတွင်း ရရှိခံစားရမယ့် အလုပ်သမားဥပဒေပါ ခံစားခွင့်ပါ။
နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားတွေ အတွက်တော့ 퇴직금(ထွဲဂျိဂွန်)လို့ မသုံးပဲ 출국만기보험(ပြည်တော်ပြန်အာမခံကြေး)လို့ သုံးနှုန်းပါတယ်။
퇴직금ဆိုရင် အဓိပ္ပါယ်က ရှင်းနေပေမယ့် 출국만기보험(ပြည်တော်ပြန်အာမခံကြေး)လို့လည်း သုံးနှုန်းတော့ ထွဲဂျိဂွန်လား အာမခံကြေးလားဆိုပြီး နား မျက်စိ နှာခေါင်း အကုန် ရှုပ်စရာဖြစ်လာပါတယ်။
퇴직금(လုပ်သက်ခံစားခွင့်)လို့ပဲ ခေါ်ခေါ် 출국만기보험(ပြည်တော်ပြန်အာမခံကြေး)လို့ပဲ ခေါ်ခေါ် လုပ်သက် တနှစ်အထက်ရှိသူတိုင်း အလုပ်ထွက်ရင်ခံစားခွင့် ရမယ့် ခံစားခွင့်ပါ။
ကဲ သက်သေအထောက်အထားရှိမှ ယုံကြည်တာကောင်းတာမို့ အောက်မှာ သက်သေ၂ခု တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ပထမတခုက 출국만기보험(ပြည်တော်ပြန်အာမခံကြေး)ဆိုတာ 퇴직금(လုပ်သက်ခံစားခွင့်)နဲ့ သဘောတရားချင်း အတူတူပါပဲလို့ ဖော်ပြထားတဲ့ ဥပဒေပါစာသားပါ။
외국인근로자의 고용등에 관한 법률 제 13조 2항 사용자가 출국만기보험등에 가입한 경우 [근로자퇴직급여 보장법] 제8조제1항에 따른 퇴직금제도를 설정한 것으로 본다.
외국인근로자의 고용등에 관한 법률 제 13조 2항
နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမား အလုပ်ခန့်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၃ အပိုဒ် ၂
사용자가 출국만기보험등에 가입한 경우
အလုပ်ရှင်သည် 출국만기보험(ပြည်တော်ပြန်အာမခံကြေး)ကို ပေးဆောင်သည့်အခါ
[근로자퇴직급여 보장법] 제8조제1항에 따른
(အလုပ်သမားမှ အလုပ်ထွက်သည့်အခါရသည့် လစာ ကာကွယ်ရေးဥပဒေ)ပုဒ်မ၈ အပိုဒ်၁ အရ
퇴직금제도를 설정한 것으로 본다.
퇴직금제도(ထွဲဂျိဂွန်ဥပဒေ)အဖြစ် ပေးဆောင်သည်ဟု မှတ်ယူသည်။…တဲ့
(ဥပဒေအားလေ့လာရန်လင့်ခ်-외국인근로자의 고용 등에 관한 법률
ဒါဟာ အလုပ်ရှင်က 출국만기보험ကို ပေးဆောင်ခြင်းဟာ 퇴직금ပေးဖို့အတွက် ပေးဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဥပဒေမှာ အတိအလင်း သတ်မှတ်ပေးထားတာပါ။
ဒီ အာမခံကြေးပေါ်လာတာကလည်း ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေ အလုပ်ဝင်လုပ်နေတဲ့ စက်ရုံတွေက အလုပ်ရှင်တွေဟာ အများအားဖြင့် အသေးစားနှင့် အလတ်စား စက်မှုလုပ်ငန်း တနိုင်တပိုင်လေးတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ စက်ရုံတော်တော်များများ အလုပ်ရှင်ကိုယ်တိုင် အလုပ်သမားနဲ့ တန်းတူ အထုတ်ဝင်ထမ်းနေရတယ်လေ။ဒီလုပ်ငန်းလေးတွေဟာတိုးတက်ဖို့လမ်းကြောင်းလည်းရှိသလို ဒေ၀ါလီခံရဖို့ကလည်း နီးစပ်နေတဲ့ စက်ရုံလေးတွေပေါ့။
ဒီတော့ အလုပ်သမားက အလုပ်ထွက်တဲ့အခါ ငွေကြေးကလည်း များများစားစားမရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်
ဒေ၀ါလီခံရတဲ့အခါမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ထွဲဂျိဂွန်ကြေးကို တလုံးတခဲတည်း သို့မဟုတ် လုံးဝ မပေးနိုင်ဖြစ်ကြရတယ်လေ။
အဲ့ဒီလို အခြေနေမျိုးမှာ အလုပ်သမားအနေနဲ့ ထွဲဂျိဂွန်ကို အခက်အခဲမရှိ ရရှိနိုင်အောင်ဆိုပြီး အစိုးရက အလုပ်ရှင်တိုင်း မဖြစ်မနေ ဆမ်ဆောင်းမှာ 출국만기보험(ပြည်တော်ပြန်အာမခံကြေး)ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ လစဉ် လစာရဲ့ 8.3%ကို ပေးဆောင်စေပြီး အလုပ်သမားကလည်း ထွဲဂျိဂွန်ကို ရယူတဲ့အခါ 70%ကို ဆမ်ဆောင်းကနေ အာမခံကြေးအဖြစ် ရယူနိုင်အောင် စီမံပေးခဲ့တာပါ။
ဆက်လက်ပြီး အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာန တာဝန်ခံ ချွဲဂီဒုန်းရဲ့ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဖြင့် သက်သေထူပါရစေ။
고용노동부국제협력관 최기동 : 퇴직금을 적립했다가 주는 방식입니다. 사업주가 바로 주지않고 퇴직금을 보험으로 적립했다가 사유가 발생할 때 근로자한테 퇴직금 명목으로 주는 겁니다.(제321회 4차 법안심사소위원회 회의록)
တာဝန်ခံရဲ့ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ဘာသာပြန်ကြည့်ရအောင်။
퇴직금을 적립했다가 주는 방식입니다.
(출국만기보험-ပြည်တော်ပြန်အာမခံကြေးဆောင်တယ်ဆိုတာ) ထွဲဂျိဂွန်ကို စုဆောင်းပြီး ပေးတဲ့ နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
사업주가 바로 주지않고 퇴직금을 보험으로 적립했다가
အလုပ်ရှင်က (အလုပ်ထွက်တဲ့အခါ)တခါတည်း မပေးပဲ ထွဲဂျိဂွန်ကို အာမခံကြေးအနေနဲ့ စုဆောင်းထားပြီး
사유가 발생할 때
근로자한테 퇴직금 명목으로 주는 겁니다.
အလုပ်သမားထံ ထွဲဂျိဂွန်ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
(제321회 4차 법안심사소위원회 회의록)
(၃၂၁-၄ကြိမ်မြောက် ဥပဒေစိစစ်သုံးသတ်ရေး အစည်းအဝေး)
출국만기보험(ပြည်တော်ပြန်အာမခံကြေး)ဆိုတာ 퇴직금(လုပ်သက်ခံစားခွင့်)ကို ဆိုလိုတာဆိုတာ အငြင်းပွားဖွယ်မရှိတော့လို့ ထင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီတော့ 출국만기보험(ပြည်တော်ပြန်အာမခံကြေး)=퇴직금(လုပ်သက်ခံစားခွင့်)ကို အခြေခံအလုပ်သမားဥပဒေမှာ အတည်ပြုသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ အတိုင်း အလုပ်ထွက်ပြီး ၁၄ရက်အတွင်း လက်ခံရရှိရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်း သံသယဖြစ်ဖွယ် အငြင်းပွားဖွယ် မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။
ကိုင်း ဒါဆိုရင် ကျနော်တို့တွေ အခု ၇လပိုင်း ၂၉ရက်နေ့ကစပြီး ကျင့်သုံးတော့မယ် ထွဲဂျိဂွန်ဥပဒေသစ်ကို အလုပ်အကိုင်အပျက်ခံပြီး ဘာလို့ဆန့်ကျင်နေကြတာလဲ။
ကဲ ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ပဲ။နောက်နေ့တွေ ဆက်ရအောင်နော်။တခြားအလုပ်တွေလည်း ရှိသေးတာမို့ နားလည်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Posted by စိုးမိုးသူ at 9:53 PM